Tian’ireo Media Ao Shina Raha Mba Tianao Toy Ny Itiavanao Ny Ankohonanao Ny Fanjakàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2016 14:20 GMT
Hoy ilay dadabe hoe : “Ny fanehoana fankatoavana ny loharano niandohàna manoloana ny fanjakàna dia endriky ny fankatoavan'ny zanaka ny rainy, tanterahantsika izay rehetra asain'ny fanjakàna ataontsika.” Pikantsary avy amin'ny CCTV.
Ny fankatoavana ny loharano niandohana, na fanehoana fanajàna ny nahitànao masoandro sy ny zokiolona ao anatin'ny fianakaviana, dia soatoavina manandanja be ao anaty kolontsaina Shinoa –“fianakaviana/ankohonana” no tenifototra eto. Raha mety haneho fanajàna amin'olona iray hafa na zavatra iray eo amin'ny fiainany ny olona iray, zavatra miavaka mihitsy ny hoe fifamatoran'ny fianakaviana, ary ny olona dia tsy maintsy mampiseho karazana fifandraisana samihafa eo amin'ny fombafomba isanandro.
Saingy toa katsahan'ny mediam-panjakana Shinoa hitarina ny famaritana ny atao hoe fankatoavana ny loharano niandohana. Tao anatin'ny vaovao navoaka tamin'ny herinandro lasa, nampidirin'ny China Central Television (CCTV) ny fomba fisaina iray hafa momba ilay teny — “fanehoana fankatoavana ny loharano niandohana manoloana ny fanjakana”.
Asongadin'ilay ampahany ireo tafa roa niresahana momba ny fomba tokony hanehoan'ny olona amin'ny fiainany isanandro ny fankatoavana ny loharano niandohana. Tanora iray mpitsabo no namaly hoe, “Voalohany indrindra dia tokony haneho fankatoavana ny loharano niandohana manoloana ny fanjakàna isika, satria tsy misy fianakaviana raha tsy misy firenena.” Ary lehilahy lehibe iray no nilaza hoe, “Ny fanehoana fankatoavana ny loharano niandohana manoloana ny fanjakàna dia endriky ny fankatoavana ny loharano niandohana, tanterahantsika izay rehetra asain'ny fanjakàna ataontsika.”
Tsy hoe manaloka fotsiny ny tsipika manasaraka ny fianakaviana sy ny fanjakàna io, ary ny tsy miankina sy ny fanjakàna, fa koa fihemorana mankany amin'ny Shina fahagola, fony ireo amperora nanamarina ny fitondràny tamin'ny hevitra hoe fianakaviana iray goavana be ny Shinoa rehetra.
Marobe ireo mpisera ety anaty aterineto no nahita hoe mahatsikaiky ny nampiasàn'ny CCTV ilay teny. Ilay mpanoratra, Wu Gou, nanoratra tao amin'ilay sehatra media sosialy Shinoa malaza, Weibo :
Amin'ny fianakaviantsika ihany isika no afaka maneho ny fankatoavana ny loharano niandohana. Indraindray mifanipaka ny tsy fivadihana sy ny fankatoavana ny loharano niandohana. Ny fifanipahana tahaka izany dia taratra ao anatin'ny fomba fitenin'ny maro hoe tsy vita ny sady hanome fahafahampo ny tsy fivadihana no haneho fankatoavana ny loharano niandohana. Hitan'ìreo Confucians ny safidy manadala teraka eo anelanelan'ireo zavatra roa ireo ary dia natrehan-dry zareo ilay olana tamin'ny nametrahana ny fankatoavana ny loharano niandohana ho eo alohan'ny tsy fivadihana : noho ny fitiavanao ny rainao, azonao tapahana ny fifandraisanao amin'ny amperora, saingy tsy azonao tapahana ny fifandraisanao amin'ny rainao noho ny fitiavanao ny amperora. Mahatsikaiky tanteraka ilay fomba filaza hoe “fanehoana fankatoavana ny loharano niandohana manoloana ny fanjakana”.
Notsindrian'i @Wolfman1989, mpampiasa Weibo, fa ny fianakaviana no tokony ho alohan'ny fanjakàna :
Fa dia inona loatra ity hoe “fanehoana fankatoavana ny loharano niandohana manoloana ny fanjakana” ity? Ny fianakaviana no misy alohan'ny firenena. Rehefa tsy misy fianakaviana, iza no hijoro eo hofehezin'ny Antoko Kaominista Shinoa? Raha tsy misy izao governemanta amperinasa izao, afaka fotsiny mifidy iray hafa isika. Miangavy e! Mba lojika alohan'ny hitenenana. Eo mba hanompo vahoaka ny fanjakàna, isika no lehibeny. Ny fanjakàna no tokony hiondrika amin'ny vahoaka, ahoana no ahasahianareo miteny momba ny fanehoana fankatoavana ny loharano niandohana manoloana ny fanjakana? Toy ny ampondra tsy misy saina ny CCTV.
Yu Ge nino fa fomba iray hafa hiantsoana ny “fanjakàm-pianakaviana” ilay fomba fiteny :
Amin'ny fampitambarana ny firenena sy ny ray ho lasa iray, atambatry ny fanjakana koa ho lasa “fanjakam-pianakaviana” ny fianakaviana sy ny fokom-pianakaviana. Ho an'ny mpifehy, ny fahitàna ny firenena ho toy ny fianakaviany dia midika fa ny politikan'ny firenena dia hanjary ho raharaham-pianakaviana, na horaisin-dry zareo ho toy ny raharaham-pianakaviana ny politikam-pirenena ka ho ataony an-jorombala ny etika politika. Ny etikam-pianakaviana no hany sisa hitan'izy ireo. Eo imasony, ny vahoaka dia taranaka mila maneho fankatoavana ny fanjakàna, toy ny fankatoavana ny loharano niandohana, sisa.
Eo ambany fanjakàm-pianakaviana, tsy avela hanana safidy ny vahoaka, hoy i Yu Yang nanazava :
Safidy ny tsy fivadihana ary zavatra tsy raikitra, “Ny mpanompo tsara dia misafidy izay tompo hotompoiny”. Zavatra raikitra tsy maintsy efaina ny fankatoavana ny loharano niandohana fa tsy safidy, satria teraka tao anaty fitambarana fifandraisana iray ny olona, ary na ratsy aza ny ray sy reny, mila manaiky izay fifandraisana izay izy ireo. Hitanao ve ny antony ilofosan-dry zareo mafy hampifangaro ho iray ny fankatoavana ny loharano niandohana sy ny fanjakàna?
Tsy gaga tamin'ilay fomba fiteny i Wu Deyu :
Aza vendrana. Amin'izao fotoana izao ny fanjakàna, ny antoko ary ny mpitarika na ny tandàpa dia mitambatra ho iray. Somary tsotsotra ireto roa farany, araka izany mifandray amin'ny firenena ny fitiavana sy ny fankatoavana ny loharano niandohana. ity no lalàna manazava ny zavatra rehetra.
Betsaka amin'ny mpisera anaty aterineto no maneso ilay hevitra :
Ry fanjakana ray amandreny, mila maka vady aho, azonao mba omena trano iray ve? 60 hatramin'ny 70 metatra toradroa no ilaiko. Ry fanjakana ray amandreny, mba afaka mijery kokoa ahy sy manome fahasambarana ho ahy ve ianao… aza manahy fa hanehoako fankatoavana ny loharano niandohana ianao…
Izao rehetra izao no tonga talohan'ny tany, ny tany talohan'i Azia, ary Azia talohan'ny firenena. Aza anontaniana izay nataon'izao tontolo izao ho anao. Voalohany indrindra, asehoy amin'ny tontolo aloha ny fankatoavanao ny loharano niandohana.
Ny tena maneho tsara ny fankatoavana ny loharano niandohana dia mandritry ny fandevenana. Hitomany hikiakiaka ny zanakalahy ary handrangotra ny tenany ho mariky ny alahelony. Araka izany, miomàna mba haneho fankatoavana ny loharano niandohana tahaka izany amin'ny fotoana handevenana ny fanjakàna. Rehefa maty ny fanjakàna, hahazo fialantsasatra isika ary ny lehilahy rehetra hisaona avokoa mandritry ny telo taona. Fiantsoana ny fahafatesany alohan'ny fotoana ny fanehoana fankatoavana ny loharano niandohana atao amin'ny fanjakàna…